बियोण्ड दि हिमालयज् र प्रतीक ढकाल - Vishwa News
पुस्तक समिक्षा : रश्मी भट्ट, न्यूयोर्क
नेपाली साहित्यका कवि, लेखक, एक चिन्तक ऊवम् विश्लेषक प्रतीक ढकाल हामी सबैका सुपरिचित नियात्राकार हुन् । अझ भनौं बिशेष गरी नियात्रा बिधाका सिद्धहस्त सफल र बरिष्ठ ब्यक्तित्व । जागिरे जीवनमा अनेकौं दु:ख दर्द खेप्दै लामो समय प्रशासनिक क्षेत्रमा बिताएका उनले दुई वटा प्रशासन सम्वन्धि पुस्तक, दुई अनुवाद कृति , एक शोक काव्य, सेती पनि काली पनि, हिमाल पारी पुगेपछि, बियोन्ड द हिमालयज ट्राभेलग, सगरमाथाको आधार शिबिरबाट जस्ता मुल्यवान नियात्रा कृति प्रकाशन गरेर नेपाली साहित्यमा योगदान पुर्याएका छन् । त्यसै गरी ” Beyond The Himalayas ” कृतिलाई अंग्रेजी भर्सनमा ल्याएर अनलाइनमा अर्थात् अमेजन्, बार्न्स एण्ड नोबल र आइ युनिभर्स डटकममा राखि विश्व साहित्याकाशमा नेपाली साहित्य र लेखक स्वयंलाई चिनाउने भर मग्दुर प्रयत्न गरेका छन् । यसले बिदेशमा बस्ने नेपाली पाठकलाई त यसै लाभ हुने नै भयो । विश्व भरका समस्त जिज्ञासु, पढ्ने बानी परेका मानव मनहरूलाई खुसी तुल्याउनेछ ।
नेपाल हिमालयको देश भनेर नामले त बिश्वमा केही हदसम्म चिनिन्छ तर यस बियोन्ड द हिमालयज कृतिले अझ त्यसलाई साॅच्चै नेपाल हिमालयकै देश हो त ? कस्ता छन् त ती हिमाल र हिमालय क्षेत्रका जन जीबन, रहन सहन ? भनेर राम्रो र यथार्थ चिनारी दिन अत्यन्तै कसरत गरेको छ ।यात्राको सुख दु:खका अनुभुति बटुल्नु एउटा राम्रो पक्ष हो । ती ठाउॅ अबस्था, प्रकृति र जनमनको चित्रण गर्नु अर्को उच्च पक्ष हो । अझै त्यसमा पनि देश भित्रकै बिभिन्न ठाउॅ घुमेर , नियालेर पाठकलाई रौं चिरा दर्शन गराउनु उच्चतम कुरा हो । यस कृतिमा खास गरी नेपालका हिमाली जिल्ला मध्ये डोल्पा र उपल्लो मुस्ताड्को बारे बर्णन गरिएको छ । धेरै र सुन्दर हिमालय भएका, सेफोक्सुण्डो, मुक्तिनाथ जस्ता प्रसिद्ध ठाॅउ भएका यस जिल्लाका बारे हामी नगएकाहरूलाई गए जस्तै र गएकाहरूलाई थप रमाईलो दिन्छ । कृतिले हिमालय नजिक, हिमाल पारी अर्थात् हिमाली भेगका हिमालको सौन्दर्य मात्र वर्णन नगरी, त्यहाॅको भौगोलिक वातावरण, पर्यटनको सम्भावना, असर, सामाजिक, आर्थिक, साॅस्कृतिक, राजनैतिक सॅपुर्ण पक्षको राम्रो नराम्रो प्रभाबको स्पष्ट वर्णन गरेको छ ।
हिमालयको देश भनेर गर्वले छाती फुलाउन हामी सबैलाई मन लाग्छ तर साॅच्चै हिमाली क्षेत्रमै पुगेर यसरी बर्णन गर्न जो पाएले सक्दैनन् र कमैलाई मात्र यस्तो अवसर, साथी र समय जुर्ला ! नेपाल गईसकेका, जान चाहने, नगइकनै नेपाललाई बुझ्न चाहने विश्वका जो कोही अंग्रेजी बुझ्नेलाई यस कृतिले नेपालका हिमाली भेगबारे पक्कै रसस्वादन गराउनेछ । त्यस भेगका गरीबीको चित्रणले पर्यटकले के सोच्लान् भने झैं पनि लाग्छ । लेखकले राम्रै राम्रो मात्र वर्णन गरेका भए नि हुने जस्तो पनि लाग्छ तर सत्य लुकाउन सकिंदैन र हुॅदैन पनि । यस कृतिले पर्यटकहरू भित्र्याएर नेपालको पर्यटन ब्यवसायलाई ठूलो टेवा पुर्याउनेछ । लेखकको मुख्य उद्धेश्य पनि पर्यटनको बिकाश नै देखिन्छ । साहित्यप्रेमी नेपालीलाई मात्र नभएर, हिमाली भु-भाग नजीकबाट प्रत्यक्ष नदेखेका जो कोही नेपालीका लागि पनि कृति पठनीय र उत्साहप्रद छ । आनन्ददायी छ । हिमाली भेगका दु:ख, अभाब , गरिवीले मुटु दुखाउॅछ भने, त्यहाॅको रहन सहन, भेषभुषा भौगोलिक वनावट प्राकृतिक वातावरण आदिले सुखको सॅचार गर्दछ । हरेक नेपालीले हेर्न ईच्छा राख्ने ठाउॅ पनि डोल्पाको फोक्सुण्डो ताल, दक्षिण तर्फका ती हिमालहरु, गुम्बा, चैत्य र उपल्लो मुस्ताङ्को कागबेनी, मुक्तिक्षेत्र, काली गण्डकी, सालीग्राम आदि नै हो ।
नेपालले आउॅदै गरेको सन् २०२० लाई धुमधामले पर्यटन बर्षको रूपमा मनाई बीस लाख जति पर्यटन भित्र्याउने लक्ष्य राखीरहेको छ । यही समयमा सरकारी स्तरबाट पनि यो र यस्ता कृतिहरूको प्रबर्धन गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो । विश्वमा छरिएका बिभिन्न नेपाली राजदुतावासहरूले यो कृति मात्र नभएर यस्ता यस्ता सबै कृतिहरू यथासम्भव स्टकमा राखेर बिदेशीलाई उपहार दिन सके झनै राम्रो हुन्थ्यो होला । नेपालको गौरव बढ्नुको साथै पर्यटक पनि धेरै हदसम्म बढ्थे होलान् । तसर्थ नियात्रा बिधामा सिद्धहस्त प्रतिक ढकालको यस” Beyond the Himalayas” कृतिले साहित्यमा मात्र नभएर नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो टेवा पुर्याउनेछ भन्ने आशा हामीलाई छ । एक पटक खोजी खोजी यस कृतिलाई अध्यनन गरौं र गरेपछि अवश्य नै कृतिले नेपाललाई बिश्वमा चिनाउन लेखकले गरेका प्रयत्न हामीलाई थाहा हुनेछ । नियात्राको, आफ्नै भुमीको रसस्वादन पनि गरौं ।